Itixaad ma tijaabo iyo kadar oo dibi dhal u joogbaa?
Qore: F. Maestro
Bismillah, salaan kaddib waxaa muuqata jahawareer iyo dayow ku dhacay gebi ahaanba somalida qof kastaaba aragtisaba ha qabee, waxaana sida soo jireenka ahba billowda eedeynta qolada jabta, oo ay muuqato halka ay wax kaga khaldameen.
Quraanku in badan ayuu dadka faraa bal inay socdaan, tacabiraan, oo baaraan bal ummadihii ka horreeyey waxay ku dambeeyeen iyo natiijadii falalkoodii, taasoo micnaheedu yahay sooyaalka taariikhdu waa macallinka ugu weyn ee qof wax bara, waa qofkii caqli leh e.
Sunnada Naabiga salla-llah calayhi, waxa ku cad in nabigu yiri,hadal micnihiisu yahay Muminka god laba jeer lagama wada qaniino, oo micnaheedu yahay waxaad mar ku khaldantay kuna dhibaatootay ha ku laaban. waxaa somalida murtideeda iyana ka mid ah mar i dage allaha dago, mar labaadse anaa is dagay.
waxaa muuqata in dhibaatada dhallinta wadaadada ahi-aan iraahdo magaca loo wada yaqaan e ITIXAAD- ay soo noqnoqotay dhowr jeer kaddib burburkii dowladdii somaliyeed.
Tariikhda haddan u milcsanno gobol iyo deegaan ahaan:
Puntland-Xagaagii 1992 waxay isku dayeen inay hoggaanka kala wareegaan SSDF oo ay wada qabteen badanaa masuuliyiinteedii.
Ka hor dhacdadan: waxaa socday dagaaladii qabiiliga ahaa, daafaha gaalkacyo, iyo gebi ahaanba gobollada koofureed oo ololayay, siyaasad ahaan SSDF way kala qaybsaneed oo waxaa had iyo jeerna marka la isu yimaado ku taagerayaal badnaa garabkii manafesto ee Maxamad Abshir.
Kaddib dhacdadan: dhimasho,dhaawac iyo burbur badan, waxaana markiiba talada iyo hoggaankiiba u liicay dhinicii uu hoggaaminayay C/llahi yusuf.
Smali galbeed- Burburkii xukunkii mingiste 1991 kaddib ayna wehelisay tabardarro qoladii tigraha ee qabsaday taladii addis ababa, waxaa la soo dhoweeyey dhammaanba somalidii urur kasta iyo dareen kastaba ha wataane; Itixaad waxay sameeysteen xafiisyo badanaa magaalooyinkii somali galbeed ku yaallay, iyo dhowr xero oo ciidan lagu tababaro, xooggii la gelin lahaa in dadka wax la baro waxuu u jiheystay is ciidamin iyo colaad, dhacdadii ka dhacday Puntland ayaa soo dedejisay inay is fara saaran Tigreegii iyo itixaad, waxayna arrintu socotay mudoo sannado ah.
Kaddib dhacdadan: in Itixaad jabo, dad badan loo laayo waa itixaad, iyo itixaad oo dad u laaya waa gaalo la jir, qofkii salaadda badshana la xiro, qofaan qaad iyo sigaar cabbinna uusan ku noolaan somali galbeed, halka gobollada oromada iyo amxaaradaba ay ka furan yihiin machadyo diini ah oo ay xor u yihiin diintooda barashadeeda.
Gedo: isla waqtiyaa ay dagaaladu ka socdaan somali galbeed ayaa xarun laga aasaasay Luuq, laguna dhaqay qaabkay ula muuqatay culimada, nasiib darro se waxay la mid ahayd jasiirad badweyn ku taal.
Sannadkii 1996 ayaa tigreegu weeraray isagoo u arkay in dagaalada somali galbeed halkan laga maamulo oo laga taakuleeyo.
Kaddib dhacdadan: Dhimasho iyo daawac badan, magaaladii oo gasha dagaal qabiileed, oo dadka dagaanku illaa hadda is laayaan, taasoo ku timid hal mar oo ay ka baxday awoodii meesha ka talinaysay.
Tan xamar iyo haatan ka sheekeyn dhaaftay!!!
Haddaba, waxaa la yaab leh maxaa keenay ina had iyo jeer tijaabo kasta oo itixaad qaado lagu hoogo oo lagu jabo, waliba eelka ay reebto uu ka sii xumaado dhibka dhacay?
Waxaan hubaa in dadka qaar si sahal ah ugu turjuman doonaan diin iyo caqiido ahaan, oo qof la dilo ama koox laga adkaado aanay tusayn liidasho diineed, waayo Rasul Eebbe soo diray, Asxaab iyo Awliyaba waa la layn jiray.
Waxaanse shaki ku jirin ragga dhimanaya ama dhaawacmaya inay niyad hayaan, ragga ay talada u dhiibteense qabkay wax ku wadaan su'aal baa ka taagan.
Haddaba, waxaan jeclaan lahaa in la is weydiiyo, Itixaad ma tijaabo iyo kadar oo dibi dhal u joogbaa?